Muxuu Salka Ku Hayaa Socdaalka Cali Khaliif Galeyr uu Ku Tagay Magaalada Laascaanood | Allbanaadir
Muxuu Salka Ku Hayaa Socdaalka Cali Khaliif Galeyr uu Ku Tagay Magaalada Laascaanood
Cali Khaliif Galeyr oo horey u soo noqday Madaxweynaha Khaatumo kuna biiray maamulka Somaliland oo horey ay u dagaalsanayeen, ayaa shalay dib ugu laabtay magaalada Laascaanood ee uu ka soo jeedo, halkaa soo ay hareeyeen dibadbaxyo waa weyn iyo rabshado looga soo horjeda joogitaanka ciidamada maamulka Hargeysa ee magaalada iyo guud ahaan gobalka Sool.
Imaanshaha Cali Khaliif ee magaalada Laascaanood ay ka dambeysay markii ay wada hadal yeesheen Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xubno horey madax uga soo noqday Somaliland oo hadda dareemay culeyska xooga badan ee kasoo wajahay dhinaca gobalkaas.
Cali ayey u arkeen shaqsi ay adeegsan karaan waqtigan, waxayna xooga saareen sidii uu kulamo ula qaadan lahaa waxgaradka magaalada Laascaano oo ay ka wada hadlaan in uu ku qaciyo siyaasadiisa ku aadan arrimaha maamulka Gooni-goosadka ah ee Hargeysa.
Hotelka Xamdi oo ay magaalada uga go’odoonsan yihiin xubnaha xilalka iyo mansabka ka haya maamulka Somaliland ayaa ilaa xalay ay ka socdeen kulamo aan kala joogsi laheyn, loogana hadlayay arrimaha ku saabsan dagaalka deegaanka Tukaraq.
Cali Khaliif oo ay ka buuxdo naceybka uu u qabo Puntland ayaa doonaya in uu bulshada Laascaano ka gado siyaasadda maamulka Hargeysa, laakiin shacabka iyo Odayaasha dhaqanka ayaa si adag uga hor yimi damaca guracan ee Cali Khaliif & Horgalada Somaliland.
Cali wuxuu jeclaa in uu dagaal ka dhex rido beelo walaalo ah, isagoo adeegsanaya arrimo siyaasaded, balse hadda xaaladda ayaa isku bedeshay in ay ku xumaato kooxdii uu taageersanaa ee Somaliland, oo Beelihii Gobalka Sool ka hor yimaadeen, una diyaarsan yihiin in ay taageeraan ciidamada Difaaca ee Puntland.
Lacago fara badan ayay ku bixinayaan sidii maleeshiyo beeledyo looga qori lahaa galbeedka magaalada Laascaanod, waxayna xooga saarayaan sidii damaca Muuse Biixi uga hirgali lahaa gobalka Sool, waxaana aad u adag in ay helaan taageerada ay rabaan.
Dagaalo culus ayaa dhexmaray ciidamada Puntland & Somaliland, waxayna Puntland hadda doonaysaa in ay si dhab ah ula wareegto gobalka Sool, iyadoo ay muuqato diyaar garowgii ugu cuslaa ee uu maamulkaas kula wareegayo gobalkaas, taas oo welwel iyo walaac ku abuurtay Somaliland.